Riix barta si aad raadin cusub u biloowdo
Waxaa la raacayo Gudaha xaruumaha-COA
Soo dhoweeynta, qolalka sugitaanka, daaradaha iyo qolalka qaabilaadda ee GZA iyo JGZ waa in aad had iyo jeer maaskeraka xiran tahay.
Ka hor inta aad duruusta ama hawlgallada ka qeyb gelin waa in aad foom caafimaadkaada ku saabsan buux buuxisaa. Hawlgallada qaar oo xaruunta waxaa laga yaabaa in kuwa waayeelka loogu tala galay korona fiiruska awgii la baajiyo.
Xaruuntaada ka eeg sida GZA loola xiriiri karo. Ma rabtaa in aad GZA la ballanto? Wac namabrka telefoonka ee GZA rugtaada. Nambarka telefoonkaas waxa uu ku yaal booster-ka iyo albaabka GZA. Ma xiran tahay GZA rugtaada? Markaa wac "de Praktijklijn": 088-112 2 112.(la heli karo 24/7).
Xannaanada Caafimaad ee Dhallinta (De Jeugdgezondheidszorg JGZ) waxa ay leeyihiin saacad qabilaad oo waalidka iyo carruurtooda. Waxaad taasi ak heleysaa warqad casumaad. Keligaa imoow marka aad casumaad hesho lana imoow 1 waalid oo keli ah saacadda qaabiladda ee JGZ. Haddii qolka sugitaanka uu furan yahay, ku dhoowra qolka sugitaanka xitaa kala fogaasho dhexdiinna oo dhan 1,5 meter.
Waxaa kaloo dhaqangelaya:
- Goobaha dadweynaha oo dhan, gudaha ama bannaanka, waa qasab in kala fogaasho 1,5 meter ah la ilaaliyo dadka deggan iyo shaqaalaha.
- Isku imaatin iyo xaflado waa mamnuuc in lagu qabto unugyada degaanka.
- Ugu badnaan 1 qof ayaa ku soo booqan kara maalintiiba (laga reebo carrurta da’da ilaa 13 jir). Ilaali had iyo jeer 1,5 meeter kala fogaasho ah.
Xeerarka kor ku xusan sidooda loo fulinayaa. Haddiba aad xeerarka ilaalin weeyso, si adag ayaan wax uga qabaneynaa waxaana ku dul saareynaa nidaam xeereedkeeda. Dadka nederlaandka ah xitaa waa quseeysaa ganaaxuna waa mi daad u sarreya.
U fiirso: waxaa dhici karta in xaruuntaada iyada oo taa caafimaadka iyo nabadgelyada la xiriirta uu nidaam kale ka jiro.
Waxaa ku jirta nabadgelyada dadka deggan oo dhan in qof waliba uu ballamada ka soo baxo!
. Lacag la’aan ku wac Praktijklijn iyo Tandartslijn
Si ku meel gaar ah waxaa aad wakhtiyada ka baxsan funaanshaha xafiiska lacag la'aan kaga wacan kartaa nambarrada gaarka ah ee Praktijklijn iyo Tandartslijn.
Saacadaha xafiisyada furan yihiin waxa aad nambarka rugta ka wacan kartaa GZA. Kaasi waxa uu ku yaal booster-ka ku yaal albaabka GZA iyo meelo kale oo azc-ga ka mid ah.
Haddii aad lahayn telefoon shaqsi ah waxaad si caadi ah zorgtelefoon uga wacan kartaa Praktijklijn iyo Tandartslijn.
1.Korona fiiruska: maxaad ka yeeli kartaa si faafista looga hor tago?
Maxaad kaga hor tegi kartaa faafinta xanuunka korona? Halkan ka qaado talooyinka.
1. ka fogaaw baraha lagu badan yahay
2.. Ka fogow 1.5 meeter dadka kale, tusaale ahaan marka aad soo adeeganeyso oo kale
Carruurta ilaa iyo da'da 13 sano jir logama baahna in ay kala fogaadaan. Xitaa loogama baahna in ay waayeelka ka fogaadaan.
3. Ku xiro maaskerka gudaha dhismayaasha dadweeynha. Taasi waa qasab. Xitaa qaabiladda, qolalka sugitaanka iyo daaradaaha COA. Xitaa qolalka sugashada- iyo qaabiladda ee GZA iyo JGZ.
4. Ku dhaq gacmahaada saabuun dhowr jeer maalintiiba. Si fiican u dhaq xitaa faraha dhexdooda.
5. Adeegso safaleeti xaashi ah marka aad indhisto iyo diifsato. Safaleetigaasi hore uga tuur baaldiga qashinka.
6. Ku hindhis kuna qufac xusulkaada guduhiisa.
7. Gacanta ha isku salaamina.
IND waxa ay bilowday dhageeysiga mararka qaar (loo adeegsado shaashad). Haddii waqtigaada la gaaro, waxa aad ka heleysaa casumaad IND. Marka waa in aad si joogto ah u baarta in qaabilaadda COA warqado kuu yimadeen. Si loo qabto tele-dhageeysiga waxa aad isticmaali kartaa kombiyutar iyo qol wadahadal ook u yaal xaruunta-COA. Ka eego www.ind.nl warbixinta ugu dambeeysay.
Dugsiyada hoose 8 febraayo ayaa la furaayaa
Dugsiyada hoose waa furan yihiin.
Dugsiyada dhexe waa xirnaanayaan ilaa iyo 1 maarso. Carruurta online ayaa waxbarasha lagu siinaayaa.
Qaabilista carruurta ee xaruunta waa xiran tahay.
• Waxbarashada braatikada iskullada ayeey ka dhaceysa.
• Duruusta ardada imtixaanka leh waa la qabanayaa.
Imtixaannada waa la qabanayaa.
Ma la isboorti karayaa dad kale?
Ka biloow 18 sano jir waxaa quseeeya:
- Waxay iskula sameyn karaan isboorti dibadda oo keli ah iyaga oo 1,5 meeter kala fogaasho ilaalinaaya.
- Isboortigareey keligaa ama la isboortigareey 1 qof kale.
Ilaa iyo 18 sano jir waxaa quseeya:
Kooxo waaweyn waai sla isboortigareeyn karaan.
Isboortiga waxa un buu ka dhici karaa bannaanka.
Tartamada ka dhexeeya kooxaha isku naadiga ah waa la oggol yahay.
Tartamada lala galo naadiyo kale waa reeban yihiin.
Maqaayadaha isboortiga, qubeeyska iyo qolalka lebbiska waa xiran yihiin.
Iskullada isboortiga waa xiran yihiin.
Maxaad yeeleysaa haddi aad cabasho leedahay?
Ma leedahay cabasho noqon karta fiiruska korona? isa soo baar!
Cabashada waxay noqon kartaa :
- lumista lama filaan ah oo urta iyo dhadhanka
- xumad ama qandho
- cabashada hargebka : sida hargebka sanka, san dareer, hindhisyo, cuna xanuun, qufac, iyo neef ku dheg.
U wac GZA xaruunta ama xiritaanka keddib ee GZA xaruunta de Praktijklijn 088 - 112 2 112 ama 0800 - 020 1 051 (nambar lacag la'aan) si aad ballan baaritaan u dhigato.
Nambarkaada daryeelka gacanta ku sii hayso. GZA waxa ay kuu dhigayaan ballan si laguu baaro.
- U bax dibadda marka aad baaritaanka aadeeyso oo keli ah.
- Joog guriga inta natiijada baaritaanka ka caddaaneyso.
- GZA ayaa natiijada kula soo socodsiin doonto.
Sideen u isticmaalaa maaskerka afka?
• Maaskerka ka hor inta aadan xiran iyo marka aad iska saarto keddib ku dhaq gacmahaada ugu yaraan 20 ilbiriqsi biyo iyo saabuun.
• Xirashada- iyo iska saarista ka qabo oo keli ah laastikaga.
• Ku dadaal in afkaada, sankaada iyo garkaada si fiican u dedan yihiin keddibna ha taabanin.
Ku tuur maaskerka afka qashinka si taas ah. Ama ku keydso bac gooni u ah inta aad ka tuuri doonto ka hor.
• Maaskerkiiba halkii marba xirnow ugu badnaan 3 saacadood. Haddii uu maaskerka qoyo dib ha u adeegsanin. Markaa isticmaal maasker afka oo cusub.
• Ku kala keydi maaskerka nadiifka ah iyo kan la soo isticmaalay laba bac ama qasacad oo kala duwan.
Maaskerka afka oo iskaa aad u sameeysatay bac ku soo xiro si aad guriga ugu dhaqato.
Inka saar maaskerka marka aad degeyso
• maaskerka la isticmaalay iyo kan cusub ku kala xir bac kala duwan ama weel kala duwan.
Maaskerka aad adiga sameeysatay ku xiro bac si aad guriga ugu dhaqato.
Marka aad guriga timaado ama meel kale mar kasto ku dhaqo gacmaha biyo iyo saabuun.
Tallaalka ka hortagga fiiruska korona
Si loo joojiyo fiiruska korona, waxaa la cilmibaaray oo la sameeyay tallaal.
Tallaal waa daawo oo wakhti dheer kaa difaaceeysa cudur faafa. Dhakhtarka ama kalkaalisada caafimaad ayaa cirbad durriin ah tallaalka kugu siineysa. Taasi waxaa loo yaqaan tallaalis.
Tallaalka ka hortagga fiiruska korona adiga ayuu ku difaacayaa. Marka ay sii kordhaan dadka tallaalan waxaa sii yaraanaaya dadka u jirran fiiruska korona amaba cudurka faafin kara. Markaas ayeey xeerarka xannibaada korona yaraan karaan oo xurnnimo badan aan dib u heli karnaa.
Tallaalista ka hortagga fiiruska korona ma aha qasab. Adiga ayaa iskaa u dalban kara in aad qaadaneyso tallaalka ka hortagga fiiruska korona. Markaa waxaa laguu soo dirayaa casumaad. Tallaalka ka hortagga fiiruska korona waa lacag la’aan.
Dowladda ayaa bixineysa warbixnta ku saabsan tallalka iyo tallaalista. Wakhtiga xaadirka ah waxa ay dowladda ku mashquul tahay u diyaargarowga si qof kasta uu tallaalka fiiruska korona u heli lahaa.
U guurista dowladda hoose wakhtiga gurmadka korona
U guuristeyda dowladda hoose ma hirgelayaa weli wakhtiga gurmadka korona?
Dowladaha hoose badankooda haa. Dowladaha hoose qaarkood maya. Haddii ay dowladda hoose go’aansato in guuris la qorsheeyay aysan hir galeyn, waxaad lahaaneysaa xuquuqdaada dejjin soo dhoweyn. Waxaanda lacagta uusbuuclaha ah ka heleysaa COA. Waxaana kaaga socda xagga COA weli ceymiska caafimaadka iyo midka mas’uuliyad qaadka xagga sharciga. Taasi waa mid hirgaleysa xitaa haddii aad hore kunturaad kiro u saxeexday.
Ma diidi karaa in aan guuro haddii aan kunturaadda kiro hore u saxiixay?
Maya, haddii kunturaadda kiro aad saxiixday degmadana gurrista aysan diidin waa in aad guurtaa.
Haddii oo keli ah aad adiga ama dadka kula deggan mid ka mid ah laga yaabo in uu korona fiiruska ku dhacay (qandho, hergeb, qufac), waa in adiga iyo kuwa kula deggan 10 maalin aad karantiil gashaan markaa guritaanka ma dhacaayo.
Waxaan ahay qof la keenay waxaana la degganahay qofkii i dalbaday, balse weli ma lihi dokumenti joogitaan. Ma ku jiraa ceymis?
Inta aad weli helin dokumenti joogitaan, waxaa ku ceyminaaya COA. Maadama aadan iska diwaan gelin karin dowladda hoose, ma codsan kartid lacagta garbgalka nolosha.
Waa kee nidaamda hawlgal ee ka jira Nederland?
Gudaha traamka, baska, metroga iyo treenka waa in aad maskerka afka xirataa. Taasi waxay xitaa quseeysaa taxi raacista. Inta aad kareyso guriga joog. Ha gelin safar aan daruuri ahayn.
Maaskerka afka waa qasab
Traamka, baska, metroga iyo treenka waa in aad maaskerka afka ku xirataa. Taasi waxa ay xitaa quseeysaa gaadiidka taxi-ga.
Xitaa gudaha daaraha dadweynaha, sida tusaale ahaan dukaamada ama steeshinka (treenada) xirashada maaskerka afka waa qasab.
Haddii aad maaskerka afka xirneyn waxaad mudan kartaa ganaax dham € 95.
Ku xiro maaskerka afka xitaa qolalka sugashada iyo daaradaha ee COA, GZA iyo JGZ !
• Waxad kula ballami kartaa dibadda dad la eg ugu badnaan 2 qofood ama dadka aad guri wada deggan tihiin aa idil.
Carruurta ilaa iyo da'da 13 sano jir ma lagu tirinaayo.
• Waase in aad 1,5 meeter kala fogaasho ah dhowrtid. Carruurta ilaa iyo da'da 13 sano jir loogama baahna in ay 1 meeter kala fogaasho ah ilaaliyaan.
Dadka 1 guri ka wada yimid waa ay isku dhowaan karaan.
- Maqaayadaha iyo baararka waa xiran yihiin.
- Shineemooyinka, teyaatarrada iyo hoolalka kunsheertada waa xiran yihiin. Maktabadaha qaar waa ay furan yihiin si buugaagta looga soo qaato. Taasi ka eego website-kooda.
- Dukaamada badankooda waa xiran yihiin. Marka laga reebo suuqyada waaweyn, farmashiiyeyaasha iyo tukaamada bagaashka. Habeennada iibka ma jiraan.
- Ka bilow 10 febraayo waxaa macquul ah in dukaamada aad online-ka ama telefoonka wax uga dalbato aadna soo qaadato. Waxaad agabkaada soo qaadan kartaa muddo xaddadan gudaheeda. Hal qof oo keli ah ayaa agabka soo qaadaayo. Dalabka iyo soo qaadashada waxaa ugu yaraan u dhexeeysa 4 saacadood.
- Iskullada isboortiga waa xiran yihiin.
Ka bilow 23 janaayo waxaa Nederland ka hirgalay bandowga habeenka. Taasi macnaheeda waa in inta u dhexeeysa 21.00 saac habeenkii iyo 04.30 saac aroornnimo aan bannaanka loo bixi karin.
Marka ay tahay lagama maarmaan oo keli ah, ayaad bannaanka u bixi kartaa. Tusaale ahaan haddii ay noqoto in aad cisbitaalka aaddo. Ama marka ay tahay in aad safarto dacwaddaada magangelyo aawgeed (tusaale ahaan marka IND ay dhageeysiga kula leedahay). Markaa waa in aad caddeyn tusin kartaa oo ay ku taallo sababta kalliftay in aad bannaanka u soo baxdo.
Haddii aad bandowga habeenka ku xad gudubto waxaa lagu siin karaa ganaax lacageed dhan € 95.
Waxaad ugu badnaan gurigaada ku xasumi kartaa 1 qof maalintiiba. Waase in aad 1,5 meeter kala fogaasho ah ilaalisaan.
Waxaa dhici karta in la'ii qaadsiiyay Korona Fiiruska
Wac GZA-da. Namabrka gaabtaada waxa aad ka heleysaa booster-ka ama albaabka GZA.
Xeer nidaameedyo dheeraad ah:
• Si fiican ugu nadiifi biyo sabuun leh qolka ama unuga (xitaa qalabka, maacuunta). Dareere jeermi dile ah uma baahnid. Isticmaal mar kasta gacmageshad la sii tuuro isticmaalka keddib dhaqna gacmahaada markaa keddib (20 sekend saabun adeegso – eeg fideoga).
• Ku nadiifi baraha la taabto sida birfurista albaabka, rubinetada (khasabadda) iyo biyo deynta musqusha dareere jeermi dile ah oo ugu yaraan 70% alkool ku jiro. Yeel sidaasi ugu yaraan 1 mar maalintiiba.
• Qashinka ku fogeey bacyaasha si fiican u xiran oo aan jeexneyn.
• Go'yaasha ku qaado bacyaal xiran. Ku dhaq 60 digrii ama ka badan.
• Gurigaada joog. Taasi waxa ay quseeysaa xitaa kuwa kula deggan. Ha qaabilin booqasho.
• Fur dhowr jeer maalintiiba daaqad si aad u haweeyso.